Ny LG TV-ko dia misy port USB 2.0 fotsiny - MediaLight Bias Lighting
Fantatrao fa tianay ny manidina eny amin'ny rindrina amin'ny fivorian'ny marketing amin'ny sasany amin'ireny mpamokatra ireny.
"Andao hanao fahitalavitra OLED tsara ary hanome port USB 2.0 fotsiny."
- Mpamolavola vokatra LG sasany
Misy vahaolana vitsivitsy amin'ity olana ity, saingy tianay ho fantatra ny fomba hampiasanao ny jironao aloha.
Amin'ny ankapobeny, ny haino aman-jery MediaLight Mk2 1-4 metatra lava dia ambany 500mA (ny ambony indrindra ho an'ny USB 2.0) na dia apetraka amin'ny 100% amin'ny dimmer aza. Ireo singa lehibe kokoa dia hisarika amps vitsy kokoa rehefa mihena amin'ny ambaratonga manokana.
Ho an'ny fantsona MediaLight lehibe kokoa dia afaka mandefa fanatsarana USB maimaim-poana miaraka amin'ny baikonao (mila mangataka izany aloha ianao - tsy misy sarany raha alefa amin'ny baikonao. Raha mangataka azy ianao aorian'ny fandefasana ny kaontinao dia mandoa fotsiny ny paositra - manodidina ny $ 3 any Etazonia). Tsy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny LX1 ny enhancer. Na izany aza, afaka manampy iray amin'ny kaomandinao ihany izahay amin'ny $ 5 ($ 8 raha vidiana aorian'ny zava-misy). (Ny MediaLight, amin'ny ankapobeny, dia misy tadiny fanitarana "entana" misimisy kokoa, switch, lavitra, adaptatera, clip sns. Raha nampidirintsika tamin'ny LX1 daholo izany dia hitentina sahala amin'ny MediaLight).
Ny enhancer dia manambatra ny herin'ny seranan-tsambo USB 2.0 roa hanomezana herinaratra hatramin'ny 950mA - ny isa farany avo indrindra na dia ny 6m Mk2 Flex amin'ny famirapiratana 100% aza.
Nisy olona sasany nanontany hoe "maninona raha ampidirina ao anaty baiko rehetra fotsiny ilay mpampitombo ny herinaratra fa tsy mitaky ny hamakiantsika ilay tranonkala?"
1) Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mila ilay mpampitombo hery ary tsy te hampiakatra ny vidin'ny MediaLight izahay. Tianay ny manome ny ampahany fanampiny maimaimpoana amin'ny filàna ilaina.
2) Ny mamaky ilay tranonkala alohan'ny mividy dia tsy hevitra ratsy velively. Heverinay fa raha betsaka ny olona mamaky ilay tranonkala, dia vitsy ny mailaka azonay toa ny "maninona aho no tsy mahazo manova loko ny MediaLight?"
Ny ankamaroan'ny mpanjifanay kosa dia manenjika ny tranokala ary mamaky, izany no nahatongavanao teto! Woohoo! Ry olona feno toa anao mahalala fa voamarina ho marim-pototra ny vokatray ary asiana fiantohana feno izay mandrakotra ny fametrahana botched aza. Misaotra namaky hatreto!